Gawaarida Qalabka Mashiinka Mashiinka Qalabka Mashiinka Mashiinka Baastada ee Qiimaha ugu dambeeya, Soo-saare
Soo saaraha matoorrada biyo-abuurka mashiinka matoorrada
Gawaarida sare ee biyaha iibiya
Sida soosaarayaasha gawaarida Hawada Hawada sare ee xawaaraha sare, Waxaan bixinaa labadaba matoorrada hydraulic yar iyo xawaare sare. Tixgeli matoorkeena dareeraha dhamaan noocyada iyo qaabeynta suurta gal.
Alaabadayada kulul & adeegga
Gawaarida saliida ee Hawada culus Cadaadis sarreeya
Bamka shidaalka ee saliidda cadaadiska sarreeya, Gawaarida Gawaarida Sare ee Vane, Haydaroolka & Pneumatics, Matoorrada Haydarooliga Ba'an ee Loogu Talo Galay loogu talagalay wareegga furan iyo midka xiran labadaba. qaab dhismeedka cycloidal iyo xawaaraha hoose ee Chief Compact Hi-Torque Motor!
Matoorrada Hawada yar
Qaab dhismeedku waa mid fudud, muuqaalku waa sheeko cusub, xasiloonida xawaaraha hooseeya iyo cimriga adeegga muddada dheer ayaa ah waxyaabaha ugu horreeya ee beddelaya matoorka la keenay. qaab dhismeedka is haysta, culeyska fudud iyo cufnaanta awoodda sare. Taya yar oo tayo sare leh iyo matoor Hawada Hawada Weyn oo Lagu Sameeyay iib.
Gawaarida dareeraha leh oo leh xawaare sare oo xawaare hooseeya
sarecadaadis Waxsoosaarka matoorrada korantada xawaaraha sare ku shaqeeya, oo leh cufnaan sare oo la isku halleyn karo, qaab dhismeed iyo qaabeyn dhaqaale. Xawaare ka socota 110-1450rm, Iibso Mootooyinka Xuddunta Sare qiimaha ugu fiican annaga. Mashiinka piston axial iyo radial.
Xawaaraha sare ee Xawaaraha sare
Waxaan haynaa sannado badan oo waayo-aragnimo soo-saar ah waana shirkad wax soo saar tayo leh. Nooca Xawaaraha Sare ee matoorrada wadista korantada, Gawaarida Gawaarida Gawaarida Sare, Qalabka rotor-ka iyo stator, matoorada ugu awoodda badan adduunka, lagu kalsoonaan karo & wax ku oolka ah.
Waa maxay matoorrada dareerayaasha si ay u iibsadaan?
Waxaan bixinaa alaab tayo sare leh, qiimo jaban. 50 hp motor hydraulic, 540 rpm mashiinka hydraulic, 20 hp matoorrada korantada, xitaa 10,000 rpm matoorrada korantada. Sannado khibrad soo saarid baabuur ah oo keliya ayaa ku siinaya mootad tayo sare leh oo waarta. Shiinaha soosaarayaasha matoorrada korantada xawaaraha sare ku shaqeeya.
Waa qalab beddela cadaadiska Haydarooliga una qulqulaya dhaqdhaqaaqa wareega. Dareeraha shaqeeya wuxuu noqon karaa biyo ama, guud ahaan, dareeraha Haydarooliga. Matoorrada Haydarooliga waxay tamarta dareeraha u rogaan tamar farsamo wareega ah. Guud ahaan, matoorrada Haydarooliga waxaa lagu meeleeyaa mid ka mid ah laba nooc: xawaare sare, awood yar (HSLT) ama xawaare hoose, Xuddunta sare (LSHT).